मृ”त्युअघि भुपेन्द्र बडुवालले आफ्नी जन्म दिने आमासंग बनाएका टिकटक भिडियो ( भिडियो सहित ) – Sandesh Press
November 19, 2021 150
केही दिन अघि कैलाली टिकापुरका भुपेन्द्र बेडुवाललाई रातको करिब ८ बजे तिर आफ्नै साथीलाई के भयो भनेर घरमै लिन आएका थिए । घरमै लिन आए पछि करिव रातको ८ बजे घरबाट साथिहरुसगँ निस्किएका भुपेन्द्रलाई तिनै आफ्नै साथिले सडकमा दौडाई दौडाई ह”त्या गरेका थिए । भुपेन्द्र उनिहरुबाट भाएर बाच्न निकै प्रयास गरे पनि उनी सफल हुन सकेनन । उनलाई बिच सडकमा आफ्नै साथिहरुले खुकुरी प्र”हा”र गरि ह”त्या गरेका थिए । भुपेन्द्रलाई साथी दु”ख मा छ भनेर घरमा नै साथी बोलाउन आए पछि उनी गरबाट गएको खुल्न आएको छ । तर उनलाई आफ्नै साथिले धोका दिए पछि उनको मृ”त्युु भएको थियो ।
प्र”हरी स्रोतका अनुसार केही दिन अघि नेपाली सेनाका मेजर अशोक जंग साहिलाई आ’क्र’म’ण गर्ने समुहले नै भुपेन्द्रको ह”त्या गरेको जनाएको छ । टिकापुरको सिद्धार्थ होटल नजिकै उनिहरुको बिच झ”ड”प भएको र भुपेन्द्रको हत्या भएको प्र”हरिले जनाएको छ । झ”ड’प हुने क्रममा पुगेको प्र”हरिको टोलिले घा’इ’ते भएका भुपेन्द्रलाई टिकापुर अस्पताल पठाएको थियो । उनको टिकापुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृ”त्यु भएको प्र”हरिले जनाएको छ । प्र”हरीले घटनास्थल बाट कालो रङ्गको स्कुटी नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएको त्यही स्कुटिको आधारमा प्र”हरिले घ”टनामा संलग्नलाई प”क्राउ गरेको जनाएको थियो ।
अब हेर्नुस् मृ”त्युअघि भुपेन्द्रले आफ्नी जन्मदिने आमा संग बनाएका टिकटक भिडियोहरु :
Prevदुबई काण्ड: यी नेपाली युवतीको हेर्नै नसकिने भिडियो संसारभर भाइरल, आखिर किन यस्तो छाडा, रहर कि बाध्यता? (भिडियो सहित)
Nextभुपेन्द्र संगै गएका साथीले खुलाए त्यो दिनको घटना
आफ्नो वडामा लिए अग्रता, बालेन दोस्रो
भोलि आइतबार देशभर सार्वजनिक बिदा (बिज्ञप्ति सहित)
छरछिमेक पनि काममा निस्किने समयमा एक्लै लोकबहादुरले कसरी गरे ६ जनाको नरसंहार? प्रहरीलाई पनि खड्कियो यस्ता प्रश्न ?